Dr. Liibaan oo Madaxweynaha Soomaaliya adeer u yahay oo saaka lagu dilay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dr. Liibaan oo Madaxweynaha Soomaaliya adeer u yahay oo saaka lagu dilay Muqdisho
MAREEG 7 October 2015
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in dabley hubeysan ay saaka ku dileen degmada Wadajir Wiil uu adeer u yahay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Sida ay sheegayaan wararka dableyda hubeysan oo gaari wadatay ayaa rasaas ku furay gaari uu la socday Dr. Liibaan Cusmaan Cilmi oo aabihii oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ay isku hooyo ahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh.
Dr. Liibaan ayaa la sheegay inuu ka howl galayay Isbitaal ay leeyihiin Imaaraadka Carabta oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa intaa ku daraya Dr Liibaan uu ku soo waxbartay mid ka mid ah dalalka Geeska Afrika.
Ma jirto illaa iyo hada cid sheegatay dilkan, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Hey’adaha ammaanka dowladda.
Wixii warar ee ku soo kordha kala soco wararkeena dambe.
Ciidamada dowladda oo howl gallo balaaran ka wada degmada Kaxda